बीपी प्रतिष्ठानको रजत जयन्ती समारोह - Saptakoshionline
बीपी प्रतिष्ठानको रजत जयन्ती समारोह
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २४, २०७५ समय: १०:३७:१२
धरान/ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको २५ औं बार्षिकोत्सव तथा रजत जयन्ती आइतबार भव्यरुपमा मनाइएको छ । बीपी कोइरालाको नाममा २०५० सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले हरेक बर्ष बीपी जयन्तीको अवसर पारेर आफ्नो स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ ।
यो बर्ष १०४ औं बीपी जयन्तीसमेत हो । भारतीय राजदुर मञ्जित सिंह पुरीको प्रमु आतिथ्यमा प्रतिष्ठानले आफ्नो रजत महोत्सव मनाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली आउने भनिएपनि बिशेष कारणवश आउन नसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । रजत जयन्ती समारोहमा झण्डोत्तलन कार्यक्रम गरिनुका साथै प्रतिष्ठानका पुर्वपदाधिकारीहरुलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । प्रतिष्ठानको विकासमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै पुर्वपदा
धिकारीहरुलाई बिशेष सम्मान गरिएको उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानले पुर्वउपकुलपति डा.लोकबिक्रम थापा, पुर्वरजिष्ट्रार नन्दकुमार थापा, निर्देशक मनोहर प्रसाद गुप्ता, डा.सुन्दरमणि दिक्षित, डा.नारायणकुमार सिंह र सिनेटर डा.अञ्जनीकुमार झालाई सम्मान गरेको थियो । उनीहरुलाई उपकुलपति डा. रौनियारले दोसल्ला ओढाउनुका साथै मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए ।
प्रमुख अतिथि राजदुतले नेपाल र भारतको मैत्रीपुर्ण तथा प्रगाढ सम्बन्धको नमुना उदाहरण बीपी प्रतिष्ठान भएको बताउदै निरन्तर प्रगति गरिरहेकोमा खुशी व्यक्त गरे । भारत सरकारले प्रतिष्ठानको विकास र विस्तारमा आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग हुने उनले प्रतिवद्धता जनाएका थिए । पुर्व अस्पताल निर्देशक डा. दिक्षितले प्रतिष्ठानले विगतमा भन्दा धेरै प्रगति गरेको देखेर खुशी लागेको बताउदै बीपी कोइराला र आफुसँगको सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए । उपकुलपति डा. रौनियारले स्थापनाकालमा भन्दा धेरै पुर्वाधार र क्षमता विस्तार भएपनि प्रतिष्ठानको सेवा क्षेत्र, विरामीको चापअनुसार अभैm क्षमता विस्तार आवश्यक भएको बताए । आकस्मिक कक्ष, आइसियु विस्तारसँगै प्रतिष्ठानलाई सुपरस्पेसियालिटी सेवाको केन्द्र बनाएर यहाँबाट अन्यत्र विरामी सिफारिश गर्नु नपर्ने अवस्था सृर्जना गर्न कटिवद्ध रहेको उनको भनाई थियो । कर्मचारी, फ्याकल्टी, विद्यार्थी सबै मिलेर प्रतिष्ठानको हितमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सोही समारोहमा प्रतिष्ठानको रजत जयन्तीको अवसरमा प्रकाशित पुस्तकको विमोचन भारतीय राजदुर पुरी, डा.दिक्षित, उपकुलपति, अस्पताल निर्देशक, रजिष्ट्रारलगायतले संयुक्तरुपमा गरेका थिए । साथै, रजत जयन्ती समारोहपश्चात डा. दिक्षितले प्रतिष्ठानको अडिटोरियम हलमा बिशेष प्रवचन पनि दिएका थिए । रजत जयन्तीको अवसरमा नै विविध गतिविधिहरु भएको थियो ।